N'ogbe Hot itinye galvanized ígwè grating emeputa na soplaya |Jintai
Aha ngwaahịa:Hot itinye galvanized ígwè grating
Galvanized ígwè grating bụ ezigbo ngwaahịa maka mmiri mmiri, ọnọdụ na-amị amị ebe nguzogide corrosion dị mkpa.Ngwongwo nchara dị nro na-ekpo ọkụ tinye galvanized na bath galvanizing.Igwe ịsa ahụ galvanizing enwetala usoro nhicha elu nke tank 7, ịdị ọcha nke zinc a na-eji galvanizing na-ekpo ọkụ ga-abụ 99.95% dị ọcha.Ihe mkpuchi galvanized ga-adị ka IS-3202 / IS-4759 / IS-2629 / IS - 2633 / IS-6745 ， ASTM -A -123 ma ọ bụ dakọtara na ụkpụrụ mba ụwa.Ọdịdị nke elu dị larịị ma ọ bụ serrated
A na-eji eriri galvanized ígwè eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ụlọ azụmahịa, ọ nwere ngwa ngwa dị ka ụzọ ije, ikpo okwu, ihe mgbochi nchekwa, mkpuchi mmiri na ikuku ventilashion.Ọ dịkwa mma maka iji mezzanine decking ebe ọ na-akwado otu ibu dị ka ala siri ike atụnyere.Karịa nke ahụ, ọnụ ahịa ya na-echekwa oghere na-eme ka mgbasa nke ikuku, ọkụ, okpomọkụ, mmiri na ụda dịkwuo elu, ma na-akwalite ịdị ọcha.
Ngwọta dị n'elu: galvanized na-ekpo ọkụ
Ogologo: 2' ma ọ bụ 3'
Ogologo: 20' ma ọ bụ 24'
Galvanized ígwè grating dị na: Ọkwa 2 (Ọkara) ma ọ bụ ọkwa 3 (adighi rarii)
Dị na obere ọrụ na ọrụ dị arọ
Ọ dị na welded, pịa-kpọchiri, mkpọchi swaged ma ọ bụ ihe nrụnye ugwu
★ nwere ike zụrụ na ngwaahịa nha ma ọ bụ omenala ekepụtala izute oru ngo nkọwa.
★ Magburu onwe ibu ibu ike
★ ventilashion nke ikuku, ìhè, ụda
★ Anakọtala Liquid na irighiri ihe
★ Ndụ ọrụ ogologo
★ Wide nso nke oghe ebe
★ Galvanized ígwè grating nwere unmatched elu.Ọ bụkwa ihe ngbanwe na-adịgide adịgide maka grating serrated na-amị amị na larịị.
★ Ọ dị na ọtụtụ ụdị dị iche iche na spacing nhọrọ izute a dịgasị iche iche nke mkpa na ngwa.
★ mgbochi-ezu ohi imewe: mkpuchi na etiti bụ nkwonkwo na hinge àjà nche, nchekwa na-emeghe mma.
★ Ike dị elu: ike na ike dị elu karịa nkedo ígwè.Enwere ike iji ya maka ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu, nnukwu oghere ndị ọzọ na ọnọdụ nbudata dị arọ.
★ Bridge ije
★ usoro ịgbapu mmiri
★ Ụgbọ ala ọkụ
★ Mass transit nyiwe
★ ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri
★ Ụzọ ije na-adịghị ada ada
★ Ihe mkpuchi olulu na-abụghị skid
★ nyiwe na-eguzogide ọgwụ
★ Ụgbọ ala nyiwe
★ Vault mkpuchi
★ Mmiri mmiri
★ ahịhịa na-edozi mmiri na-ekpofu ahịhịa